Lynda ANDRIATSITONTA 0 Commentaire août 17, 2018
Zoma 17 aogositra 2018, nanambara tamin’ny fomba ofisialy ny filatsahan-ko fidiany amin’ny fifidianana filohampirenena i Hery Rajaonarimampianina. « Hanohy ny asa efa natomboka aho », hoy ny filohan’ny repoblikan’i Madagasikara am-perin’asa. Araka ny lalàna dia tsy maintsy mametra-pialana 60 andro mialohan’ny fifidianana ny filohampirenena raha mbola kandida. Noho izany, ny 7 septambra 2018 ny daty voatondro hametrahan’i Hery Rajaonarimampianina fialana.
‹ « 3 IN ONE EVENT » : Mandray CV avy hatrany	› A ANKATSO : Le président Rajaonarimampianina fait la promotion de Fisandratana 2030